Home News Beesha Caalamka iyo Igad oo isku raacay in lasii daayo Muqtaar Rooboow...
Beesha Caalamka iyo Igad oo isku raacay in lasii daayo Muqtaar Rooboow iyo Farmaajo oo ka naxsan!!
Tan iyo markii lasoo xiray musharax madaxweyne xilka madaxtinimo ee maamulka K/Galbeed Muqtaar Rooboow cali,waxaa ay beesha caalamka iyo dalalka daneeyo arrimaha soomaaliya dadaal ku bixinaayeen in xal la helo oo xuriyadiisa dib loo siiyo.
Shir aan la shaacin oo lagu falanqeeyay xariga Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur, ayaa lagu qabtay xarunta Xalane oo ah taliska Ciidamada AMISOM.
Wararka hoose oo ay heshay Mol ayaa waxaa ay sheegayaan in ay suuragal tahay in dib loosii daayo Muqtaar Rooboow islamarkaana uu ku laabto Magaalada baydhabo.
Previous articleXildhibaanada Taageersan Madaxweyne Farmaajo oo la ogaaday Sedax qeeyb oo ay kala yihiin
Next articleCiidamada Maamulka Puntland oo bilaaway xaqiijinta amniga Magaalada Garoowe
Saraakiil Qatar u dhashay oo Ku Goodiyay in ay sii Wadayaan...
Laamaha Amaanka oo aysan ka jirin wax Wada Shaqeyn Ah oo...